कहाँ कहाँ भए प्रमुख-उपप्रमुख घम्साघम्सी ?
काठमाडौं । सातै प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख-उपप्रमुखबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ। केहीको बोलचाल बन्द छ। केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका छन्। बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटगत स्वार्थ लगायतका कारण विवाद चुलिएको हो। जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेपछि विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुखको सरुवा र नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे प्रमुख र उपप्रमुखबीच मनमुटाव छ। उपप्रमुख बुद्ध बस्नेतले नगरपालिकाको फेसबुक पेजमा प्रकाशित उत्खननसम्बन्धी सूचनामा ‘कहिलेको निर्णय रहेछ यो ? ’ भन्दै कार्यपालिकाकै बैठकको अनभिज्ञता जनाएका छन्।
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा प्रमुख अशोक चन्द र उपप्रमुख सुशीला सिंहबीच खटपट थियो। ‘नगरपालिकामा एउटा मात्र गाडी, त्यसमा प्रमुखसाप मात्र चढ्ने। तर आफूलाई गाडी नभएको भन्दै उपप्रमुखले कुरा उठाएपछि पटकपटक विवाद र मनमुटाव भएको थियो’, एक कर्मचारीले भने। अहिले उपप्रमुखलाई पनि गाडीको व्यवस्था गरिएकाले विवाद सुल्झेको छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्टमाे छापिएकाे छ ।